Shiinaha 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid (PBTCA) 50% cas 37971-36-1 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
Magaca Badeecada: 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid (PBTCA) 50%
Macnaheeda: PBTCA 50%
CAS Maya.: 37971-36-1
Kiimikada Daaweynta Biyaha PBTCA, oo ah ka-hortagga daxalka wanaagsan, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa wareejinta nidaamka biyaha qabow iyo nidaamka cirbadeynta biyaha saliida ee daaweynta antifouling.
Kiimikada Daaweynta Biyaha ee loo yaqaan 'PBTCA' waxaa loo isticmaalaa sida ka hortagga daxalka ee daaweynta biyaha warshadaha. Badeecadani waxay leedahay karti isku dhafan oo fiican Ca2 +, Zn2 +, Cu2 +, Mg2 +.
Heerka ku habboon ee PH wuxuu ka bilaabmaa 7.0 ilaa 9.5. Waxay ku shaqeyn kartaa heerkul sarreeya, adkaansho sare, iyo xaalado alkalin badan. Waxay u oggolaaneysaa cunsuriyadda fiirsashada biyaha qaboojiyaha oo kordhay illaa toddobo ama in ka badan
(1) Maaddaama uu yahay wakiil wax-ku-ool ah oo miisaan leh iyo ka-hortagga daxalka, PBTC waa mid ka mid ah wax soo saarka baahsan ee la adeegsaday iyo waxqabadka wanaagsan.
(2) PBTC waa xasiliyaha ugu fiican ee cusbada zinc. PBTC waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa wareejinta nidaamka biyaha qabow iyo nidaamka biyaha dib loogu buuxiyo oilfield sida cabirka iyo ka hortagga daxalka, oo ku habboon in lagu daro milix cusbada iyo copolymer.
(3) Waxaa loo isticmaali karaa xaaladaha heerkulka sare, adkaanta sare, alkali sare iyo muujinta sare ee uruurinta.
(4) Goobaha la dhaqo, waxaa loo isticmaalaa sida wakiilka qashinka iyo saabuunta birta.
Midab aan lahayn iftiin huruud dareere hufan
Waxqabadka firfircoon (iibinta dhoofinta)%
Phosphoric acid (sida PO43 -)%
Fosfoor acid (sida PO33-)%
Cufnaanta (20 ℃) ​​g / cm3
Chloride （sida Cl-） ppm
25kg / durbaan, 250kg / durbaan, ama 1000kg / IBC TANK
Hore: 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (HEDP) HEDP 90% budada / HEDP 60% dareeraha
Xiga: budada tayo sare leh Phloroglucinol ee dawada dawada 108-73-6
Qiimaha wanaagsan CAS 9003-05-8 PAM Polyacrylamide pow ...
Nadaafad sare Xakamaynta Xakamaynta 99.5% budada 1, ...
Qalabka warshad 10% MIT Methylisothiazolinone / 2 ...
Kiimikooyinka daaweynta biyaha ee qiimaha wanaagsan Trichloroi ...
Sahayda Warshad 20% DCOIT 4,5-dichloro-2-n-octyl ...
Daahirsanaanta sare ka hortagga daxalka 50% dareere 1,2, ...